IGODO ANAGHỊ ARỤ ỌRỤ MGBE KỌMPUTA MALITERE - WINDOWS - 2019
Igodo anaghị arụ ọrụ mgbe kọmputa malitere
Ị nwere ike izute eziokwu ahụ na keyboard USB adịghị arụ ọrụ mgbe ị na-ebubata n'ọnọdụ dị iche iche: ọ na-eme mgbe ị degharịrị usoro ahụ ma ọ bụ mgbe nhọrọ gosipụtara na nhọrọ nke nchekwa na nhọrọ ndị ọzọ Windows batrị.
Enwetara m ikikere a mgbe m zichara disk diski na BitLocker - a kwadoro diski ahụ, enweghị m ike ịbanye paswọọdụ na oge buut, ebe ọ bụ na keyboard anaghị arụ ọrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, e kpebiri ide ihe ederede zuru ezu banyere otú, kpatara na mgbe nsogbu nwere ike ibute na keyboard (gụnyere wireless) ejikọrọ na USB na otu esi edozi ha. Hụkwa: Ihe keyboard anaghị arụ ọrụ na Windows 10.
Dị ka a na-achị, ọnọdụ a anaghị eme na keyboard ejikọrọ site na ọdụ ụgbọ elu PS / 2 (ọ bụrụ na ọ dị, a ghaghị ileba nsogbu anya na keyboard n'onwe ya, waya ma ọ bụ njikọ nke motherboard), ma ọ nwere ike ime na laptọọpụ, ebe ọ bụ na keyboard ahụ nwere ike USB interface.
Tupu ịga n'ihu ịgụ, hụ ma ọ bụrụ na ihe niile dị na njikọ: ma eriri USB ma ọ bụ onye nata maka keyboard ikuku dị, ọ bụrụ na mmadụ emetụ ya aka. Kasị mma, wepụ ya na pịnye ya na ya, ọ bụghị USB 3.0 (acha anụnụ anụnụ), kama USB 2.0 (Nke kachasị mma n'ime otu ọdụ ụgbọ mmiri dị n'azụ usoro usoro ahụ.) Site n'ụzọ, mgbe ụfọdụ, ọdụ USB pụrụ iche nwere nsụgharị na keyboard).
Ma ọ bụ nkwado nke keyboard USB dị na BIOS
Ọtụtụ mgbe, iji dozie nsogbu ahụ, gaa na BIOS nke kọmputa ahụ ma mee ka keyboard keyboard initialization (debe USB USBboard Nkwado ma ọ bụ Kwado USB Nkwado ka Kwadoro) mgbe ịgbanyere kọmputa. Ọ bụrụ na nhọrọ a nwere nkwarụ maka gị, ị nwere ike ọ gaghị achọpụta nke a ruo ogologo oge (n'ihi na Windows n'onwe ya "jikọtara" keyboard na ihe niile na-arụ ọrụ maka gị) ruo mgbe ị ga-eji ya ọbụna mgbe a na-arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ.
O kwere omume na ị pụghị ịbanye BIOS, karịsịa ma ọ bụrụ na ịnwe kọmputa ọhụrụ na UEFI, Windows 8 ma ọ bụ 8.1 na batrị ngwa ngwa. N'okwu a, ịnwere ike ịbanye na ntọala n'ụzọ ọzọ (Gbanwee ntọala kọmputa - Melite ma weghachite - Weghachite - Nhọrọ nkwalite pụrụ iche, mgbe ahụ na ntọala dị elu, họrọ ntinye aka na ntọala UEFI). Mgbe nke ahụ gasị, lee ihe a ga-agbanwe ka ọ rụọ ọrụ.
Ụfọdụ ndị nne na nna nwere ntakịrị nkwado dị ukwuu maka ngwa nrụnye USB mgbe ịpụrụ: dịka ọmụmaatụ, enwere m nhọrọ atọ na ntọala UEFI: mmalite nke nkwarụ na nkwutọ ngwa ngwa, nhazi mbụ, ma zuru ezu (bọs ngwa ngwa ga-emerịrị). Na keyboard ikuku na-arụ ọrụ mgbe ejiri ya rụọ ọrụ ọhụrụ.
Echere m na isiokwu ahụ nwere ike inyere gị aka. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kọwaa n'ụzọ zuru ezu kpọmkwem otú i si nwee nsogbu ahụ ma m ga-anwa ịbịakwute ihe ọzọ ma nye ndụmọdụ na nkwupụta.